Masuuliyadda Bulshada - NBC Electronic Technologic Co., Ltd.
> U hubso caafimaadka iyo daryeelka shaqaalaha.
> u samee fursado badan shaqaalaha si ay u ogaadaan kartidooda.
> wanaajiya farxadda shaqaalaha
HOUD (NBC) fiiro gaar ah u yeelo barashada anshaxa shaqaalaha iyo u hoggaansamidooda, iyo caafimaadkooda iyo daryeelkooda, waxay siiyaan jawi shaqo oo raaxo leh iyo jawi si loo hubiyo in dadka dadaala ay si macquul ah ugu abaalmarin karaan waqtiga. Horumarinta joogtada ah ee shirkadda, waxaan fiiro gaar ah siineynaa barnaamijka kobcinta xirfadda shaqaalaha, waxaan u sameyneynaa fursad dheeraad ah si ay u ogaadaan qiimahooda shaqsiyeed, riyadooda.
U hoggaansanaanta qawaaniinta dowladda, waxaan bixinnaa mushaharka oo aan marnaba ka yaraan doonin shardiga mushaharka ugu yar ee dowladda, isla markaasna waxaa la hirgelin doonaa qaab -dhismeedka mushaharka tartanka.
HOUD (NBC) wuxuu diyaariyey nidaamka amniga shaqaalaha oo loo dhan yahay, shaqaalaha u hoggaansan sharciga iyo is-edbinta. Si loo wanaajiyo hindisaha iyo hal -abuurka shaqaalaha, barnaamijka dhiirrigelinta sida abaalmarinno maaliyadeed, abaalmarinno maamul iyo abaalmarin tabarruc oo gaar ah ayaa la dejiyay. Isla mar ahaantaana waxaan leenahay abaalmarino sanadle ah sida “hal -abuurka maareynta iyo abaalmarinta soo -jeedinta caqli -galinta
- Daryeelka caafimaadka
Axdiga Hore waa in lagu saleeyaa ikhtiyaarka shaqaalaha, qof walba waa inuu helaa ugu yaraan maalin fasax toddobaad kasta. U diyaargarowga ugu sarreeya wax -soo -saarka, barnaamijka tababarka iskutallaabta ayaa hubin doona in shaqaaluhu ka jawaabi karo waajibaadka shaqo ee kale. Cadaadiska shaqada ee shaqaalaha, HOUD （NBC）, kormeerayaasha waxaa laga codsaday inay daryeelaan caafimaadka jirka iyo maskaxda shaqaalaha, abaabulaan waxqabadyada mararka qaarkood si loo hagaajiyo isgaadhsiinta ka sarraysa, loo habeeyo hawlaha dhisidda kooxda si loo hagaajiyo jawiga kooxda, loo kordhiyo is-fahamka iyo is-aaminka .
Annul baaritaan jireed oo lacag la'aan ah ayaa la bixiyaa, dhibaatada caafimaad ee la aasaasay waa la raadraaci doonaa waxaana la bixin doonaa hagid.
> Hirgelinta istiraatiijiyad "nabadgelyo, deegaan, la isku hallayn karo, tamar-badbaadinaysa".
> Samee wax soo saarka deegaanka.
> Hirgelinta tamar-badbaadinta iyo dhimista qiiqa si looga jawaabo isbeddelka cimilada.
HOUD (NBC) waxay si buuxda u bixisay fiiro gaar ah oo ku saabsan shuruudaha bay'ada, si habboon oo hufan u isticmaashay tamarteena, kheyraadkeena si loo yareeyo kharashkeena loona hagaajiyo faa'iidooyinka deegaanka. Si joogto ah u yaraynta saamaynta taban ee bay'ada ee hal-abuurnimada si loo riixo horumarka kaarboonka hooseeya.
- Ilaalinta tamarta iyo dhimista qiiqa
Isticmaalka tamarta ugu weyn ee HOUD (NBC): Wax -soo -saarka iyo isticmaalka awoodda la deggan yahay, isticmaalka LPG ee degaanka, saliidda naaftada.
Wasakhowga biyaha ee ugu weyn: bullaacadaha gudaha
- Sawaxanka buuqa
Wasaqda qaylada ugu weyn waxay ka timaadaa: kombaresarada hawada, qashin -qubka.
Oo ay ku jiraan dib -u -warshadaynta, qashinka khatarta ah, iyo qashinka caadiga ah. Inta badan: qaniinyo aan caadi ahayn, badeecooyin fashilmay, qalab laga tagay/weel/alaab, alaab xirxirid qashin, qalab qashin, warqad wasakh/saliid/maro/iftiin/batteri, qashinka gudaha.
HOUD (NBC) waxay ku adkaysanaysaa jihaynta macmiilka, iyada oo la sii wado xidhiidhka fog si loo fahmo rajada macaamilka, si firfircoonna loo qaato ballanqaadka. Si loo wanaajiyo qanacsanaanta macaamilka, adeegga macmiilka, si loo wajaho iskaashiga muddada dheer iyo ku guulaysiga macaamilka.
HOUD (NBC) waxay macaamiisha u horseedaysaa filashada qaabeynta iyo hagaajinta alaabada, hubso in dalabka macmiilku uu noqon karo jawaab waqtiga, si dhakhso ah u quudiyo baahida macmiilka, si loogu sameeyo macmiil qiimo badan.
Waxaa jira isgaarsiin rasmi ah oo aan rasmi ahayn HOUD (NBC). Shaqaaluhu wuxuu u soo bandhigi karaa cabashadooda ama si toos ah ugu soo jeedin karaa kormeerahiisa/iyada ama maamulka sare. Sanduuqa talo -bixinta waxaa la dhigayaa codka ururinta shaqaalaha heer kasta.
Ganacsi Cadaalad ah
Waxaa fiiro gaar ah la siiyay sharciga, daacadnimada iyo waxbarashada anshaxa ganacsiga. Ilaali xuquuqdaada lahaanshaha oo xushmee xuquuqda dadka kale. In la dhiso nidaam wax ku ool ah oo hufan oo ganacsi oo ka dhan ah musuqmaasuqa.
HOUD (NBC) waxay ka taxaddaraysaa uruurinta farsamada muhiimka ah iyo ilaalinta hantida aqooneed. Maalgashiga R&D waligiis kama yaraan 15% iibka sanadlaha ah, ka qeyb qaado fulinta heerka caalamiga ah. Ixtiraam hantida aqooneed ee dadka kale, oo leh dabeecad furfuran, saaxiibtinimo leh, u hoggaansamida oo adeegsata xeerarka hantida caqliga ee caalamiga ah,
Iyada oo loo marayo gorgortan, ruqsad gudub, iskaashi iwm ayaa lagu xalliyaa dhibaatada hantida caqliga. Dhanka kale marka loo eego ficilka jebinta, NBC waxay ku xirnaan doontaa cududda sharciga si loo ilaaliyo danaha nafteena.
HOUD (NBC) waxay qaadataa “mudnaanta koowaad ee amniga, diiradda saar taxaddarrada” siyaasadda, iyada oo la hirgelinayo tababarka xirfadda iyo tababarka maareynta amniga, dejinta xeerarka maareynta iyo jihada hawlgalka si loo hagaajiyo badbaadada wax soo saarka iyo shilalka.
HOUD (NBC) waa u doodaha sayniska iyo teknolojiyada, kobcinta kartida, hagaajinta shaqada. Ku firfircoon daryeelka bulshada, soo noqoshada bulshada, tabarucaadka aagga si loogu dhaqmo shirkad mas'uul ah iyo muwaadiniin.